I-Travelers Beach - I-Bungalow Kitchenette no A/C..
Igumbi e-i-resort ibungazwe ngu-Winfield
Le ndlu yamapulangwe ehlala engadini yethu izinyathelo ezimbalwa ukusuka ogwini lolwandle lwe-Negril 7-mile futhi inazo zonke izici eziyisisekelo ezidingekayo ukuze uhlale uphumule e-Capital of Casual yase-Jamaica.
Ipholiswe umoya ohelezayo wemvelo woLwandle lwe-Caribbean & isiphephetha-moya esimile, ifakwe i-cable tv, i-safe, i-ayina, ibhodi loku-ayina, izinto zangasese, i-coffeemaker futhi ifaka nekhishi.
Sihlinzeka ngezinsizakalo zokugcinwa kwendlu zansuku zonke nokuzijabulisa kwasebusuku. Indawo yethu ivikelwe yisevisi yezokuphepha yamahora angama-24.
Ikhabethe lethu lezinkuni lifakwe konke okudingayo ukuze ube nesipiliyoni solwandle esiphumuzayo. Izinyathelo ezimbalwa nje ukusuka echibini lethu elisanda kulungiswa kanye nolwandle oludumile lwe-Negril 7-Mile. Le khabhinethi itholakala engadini yethu, futhi inokufinyelela echibini lethu elisendaweni, indawo yolwandle kanye nendawo yokudlela, indawo yokuzivocavoca, igumbi lokuzijabulisa, i-scuba diving kanye ne-snorkeling.
Okubalulekile kwasekhishini kunikezwa njengezitsha, izitsha, amabhodwe, amapani njll. Uma ungekho esimeni sokupheka ungavakashela indawo yethu yokudlela, ujabulele ukudla okusanda kulungiselelwa okubheke oLwandle LwaseCaribbean kanye nokuzijabulisa kwasebusuku.
Impahla yethu ine-gates engaphambili yamahora angama-24, ukuphepha, ukugadwa kanye nenkonzo yansuku zonke yokugcinwa kwendlu. Amakati angase abonwe endaweni yethu nangaphakathi kwedolobha laseNegril.
Our guests have access to our pool area, bar and restaurant overlooking the beach, gym, entertainment room, scuba diving and snorkeling.
Impahla yethu imvamisa ithule futhi iphumule. Kusihlwa siphatha imicimbi eyahlukene ukujabulisa izivakashi zethu kusukela ngehora le-cocktail ukuya kwi-karaoke endaweni yokucima ukoma ukuze siphile umculo ohambisana nesigingci. Eminye imicimbi ingase ingatholakali ngenxa Yezivumelwano Zezempilo Nokuphepha ze-COVID.
Kudingeka ukuthi ugqoke imaskhi futhi uzijwayeze ukuqhelelana nomphakathi lapho kungenzeka khona. Uzohlolwa futhi urekhodwe izinga lokushisa lakho njalo uma ungena endaweni yethu.
Mina no-Candice singase singabi njalo ukuze sikumukele lapho ufika, nokho, ama-ejenti ethu edeski elingaphambili azobe ekhona futhi ajabule ukukusiza ngenqubo yokungena. Sibheke ngabomvu ukukubingelela.
Ngesikhathi sokungena, uzocelwa ukuthi ugcwalise futhi usayine ifomu lokubhalisa isivakashi futhi unikeze ifomu elivumelekile lokukhomba, lokhu kungaba ipasipoti yakho noma ilayisense yokushayela. Uzonikezwa ukhiye wegumbi lakho futhi ulekelelwe ekamelweni lakho.
Ipholiswe umoya ohelezayo wemvelo woLwandle lwe-Caribbean & isiphephetha-moya esimile, ifakwe i-cable tv, i-safe, i-ayina, ibhodi loku-ayina, izinto zangasese, i-coffeemaker futhi ifaka nekhishi…
4.44(18 okushiwo abanye)
4.44 (izibuyekezo ezingu-18)
Sitholakala ekugcineni eningizimu yomngcele wolwandle, siseduze nezindawo zokudlela, amabha, izitolo kanye nedolobha laseNegril. Ungathatha imizuzu eyi-10 ukuya edolobheni noma amaminithi ambalwa uhamba ngasogwini lolwandle noma umgwaqo oya ezindaweni zokudlela nezindawo zokucima ukoma ozikhethele.
I-Negril yaziwa ngamamayela angu-7 wolwandle oluhle lwesihlabathi esimhlophe kanye nolwandle lwayo olucwebezelayo oluluhlaza. I-Capital of Casual of Jamaica, i-Negril iyidolobha elisogwini elihle kakhulu futhi iyindawo engcono kakhulu yokukhipha izicathulo zakho futhi ujabulele usuku ngesikhathi sesiqhingi.
Sihlala sikhona futhi sitholakala ukuze sinikeze usizo oluningi njengoba udinga. Singumlayezo, ucingo noma izinyathelo ezimbalwa ukusuka.